Sida loo Download Videos la Alternative Clipnabber ah
> Resource > bedelan karo > Clipnabber Alternative: Download Online Video fiican yahay Clipnabber
Waa hagaag, haddii aad ka soo dejisan videos online inta badan, waxaa laga yaabaa inaad hubaal ka war Clipnabber. Iyadoo software this, users soo bixi kartaa video doonayo xaq u furmo suuqa browser gudahood iyo taageerada Converter ah oo si fudud loogu badalo karo files FLV bixi in AVI, MP3 iyo qaabab ka badan. Si kastaba ha ahaatee, xalka software this waddaa kaliya oo kaliya on Windows OS, taas oo macnaheedu yahay users Mac waxba ma goosan kartaa faa'iidooyin waxaa ka mid ah. Users Mac, kuwaas oo si firfircoon uga raadinayay Clipnabber kale oo ku xiran habka hawlgalka Mac, waxaa jira warar weyn oo kale oo la yaab leh, Wondershare AllMyTube .
Iyadoo Wondershare AllMyTube, waxaad si fudud ka soo dejisan kartaa video / music ka badan 100 video websites sida daradii TV, YouTube, iwm oo aad offline video arkaysid more farxi karo. Intaa waxaa dheer, ka dib markii uu soo degsado la doonayo video / music, aad u bedeli karaan video ka bixi inay qaabab ay taageerayaan Qalabka telefoonada gacanta aad iPad, Blackberry, Walkman iyo wixii la mid ah ... Isticmaalka kale Clipnabber tan, waxaad sidoo kale Macdan karaa MP3 ka files video.
Wixii soo degsado hoorto videos online, Wondershare AllMyTube xaqiiqdii waa doorasho fiican ee labada isticmaala Windows & Mac. Halkan waa tutorial yar si ay kaaga caawiyaan hannaanka dajinta ee Wondershare AllMyTube ah. Download First software xorta ah ee qiimaha, mar haddii la soo bixi & rakibay, intaas ka bilowno codsiga ka menu bilowga.
Log First galay video qaybsiga jecel aad website, tusaale ahaan, Dailymotion ama YouTube. Raadi video aad u xiiso u, ee website dailymotion ee. Marka aad hesho video la rabay, waxay ka ciyaaraan sidii caadiga ahayd.
Tallaabada 2 Download video fudayd
Marka video ah ka bilowdey ciyaaro, waxaad arki doontaa jiro yar D ownload button sabayn ee geeska sare ee midigta ah video ah. Riix saaran yahay ka dibna hoosaadka dooro xallinta aad video. Marka xalka la doorto, video bilaabi doonaa duuban.
Waxa kale oo aad isku dayi kartaa in marka hore aad nuqulka url video ka dibna riix badhanka URL koollada ku saabsan barnaamijka. Tani waxay kaa caawin doona inaad gaarto natiijo isku mid.
Sida video la ee asalka duuban doono, si ay u dhawrto layska casriyeeyaa xaaladda dajinta, user riixi kartaa degsado tab ee guriga-screen codsiga. Tab Tani waxay ku tusi doonaa sifooyinka kala duwan sida waqtiga haray iyo habka xawaaraha. Mar kasta oo habka dajinta dhamaato, waxaa lagugu soo wargalin doonaa pop-up. Sidoo kale, in user tab tani joojin kartaa ama yara video dajinta.
Tallaabada 3 Beddelaan videos ah (optional)
Ka dib oo dhan downloads waxaa lagu sameeyey, dadka isticmaala heli kartaa maktabadda video ah adigoo gujinaya ku dhameysatay kaalinta tab ee suuqa kala koowaad ee codsiga. Si aad u ogaato aragtida, double click ku yaal. Kuwa doonaya in ay badalo videos in ay qaab kale riixi kartaa ugu C onvert badhanka midig xaq ah shay kasta. Dooro qaab la doonayo iyo riix OK u fulinta dheeraad ah.
Waxa si fudud aad u fududahay in la isticmaalo waa kuma? Maxay yihiin hadalladan aad sugayso? Just download oo wuxuu ku raaxaysan offline videos istareexsan la Wondershare AllMyTube.